musha Africa Singers Kizz Daniel Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNigerian Celeb anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""Kizz Daniel".
Yedu Kizz Daniel Biography Chokwadi, kusanganisira yake Yehudiki Nyaya, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ongororo yeKizz Daniel's Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya. Zvikuru, musikana wemuimbi wekuNigeria, hupenyu hwepauzima, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe weanotungamira mugadziri weNigeria uye anokunda mibairo yakawanda muindastiri yeMusic.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kizz Daniel's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kizz Danieri Hupenyu Hwekutanga uye Yemhuri Yepashure:
Kutanga kubva, Oluwatobiloba Daniel Anidugbe akazvarwa pazuva re1st raMay 1994 kuAbeokuta muOgun State, Nigeria.
Akanga ari wechipiri pavana vashanu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake nababa Mr naMai Kolawole Uthman Anidugbe. Tarira, vabereki vaKizz Daniel.
Nyika yeNigerian yedzinza reYoruba ine midzi yekuWest Africa yakakurira muAkuokuta, muOgun State, Nigeria kwaakakurira pamwe chete nasisi vake mukuru, Toluwalope Sophie Anidugbe, munun'una, Mofoluwato Uthman Anidugbe nevamwe vaviri babamudiki.
Kukura muAbokuokuta, wechidiki Kizz Daniel akaziva maitiro ekufungidzira uye okusika aangave. Kutevera kuwanikwa kwehunyanzvi hwake hwekugadzira, Kizz Daniel akatsvaga kuita zvine simba nekunyora nziyo achiri mudiki kwazvo.
Kizz Daniel Dzidzo Uye Basa Rokuvaka:
Nezve dzidzo yaKizz Daniel, aive nedzidzo yake yepuraimari kuOgun International Montessori Nursery uye Primary School ndokuenda kuAbeokuta Grammar Chikoro chechikoro chake chesekondari.
Pakazosvika nguva Kizz Daniel aive 11-makore-ekupedzisira junior sekondari mudzidzi, aigara achinyora nziyo.
Akaenderera mberi achizvivandudza mukunyora nziyo muchikoro chesekondari uye ndokuenderera mberi nekudzidza Water Resources Management neAgrometeorology kuFederal University of Agriculture Abeokuta.
Kizz Daniel Bio - Yepakutanga Basa Hupenyu:
Pasina nguva refu mushure mekunge muimbi weAfropop anyoresa kuFederal University yeAgul Abeokuta, akasangana naJahBless - mugadziri - uyo akamubatsira kuziva kuti angave akasiyana sei muunyanzvi hwekuimba nekunyora nziyo.
Kizz Daniel akagadzira pfungwa yake kuti aratidze mimhanzi sebasa pamwe chete nezvidzidzo zvake. Paakapedza kudzidza kuyunivhesiti iyi, Kizz Daniel, nerombo rakanaka, akasangana naEmperor Geezy Mukuru weG-Worldwide Entertainment uyo akamusayina kunyora rekodhi yake.
Kizz Daniel Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Ndichiri kuimba nekuita mushoo dzakasiyana pasi pechinyorwa cheG-Worldwide Varaidzo, zvese zvinoita kunge zviri kufamba mushe kuna Kizz Daniel.
Pasina nguva refu mushure mekuburitswa kwa "Woju", muimbi weAfropop akatanga kuve nenyaya neG-yepasirese Varaidzo nezve chikamu chemifaro chaaive nekodzero yekugamuchira kubva purofiti yakaitwa.
Aya mamiriro akagadzira kusawirirana pakati peKizz Daniel neG-Worldwide Varaidzo. Chikwata ichi chinopesana nerunyerekupe rwekuti Kizz Daniel ari kubhadharwa mari shoma, nekuudza veruzhinji kuti yakabhadhara inodarika # 120 miriyoni kumuimbi kubva zvaakamusaina.
Izvi zvakakonzera gakava repamutemo pakati pemapato maviri izvo zvakakonzera kumiswa kwechibvumirano pakati paKizz Daniel neG-Worldwide Varaidzo.
Kizz Daniel Biography - Simuka Kukurumbira Nyaya:
Isati yamiswa kondirakiti yake neG-yepasirose Varaidzo, Kizz Daniel aive aburitsa dambarefu rake, "New Era", mu2016.
Iyo album yaive neyakavanzika senge "Woju" yakahwina dambarefu regore uye rakanakisa R & B / Pop dambarefu mumisoro muna 2016 Nigeria Varaidzo.
Nekukurumidza kusvika parizvino, Kizz Daniel padivi Wizkid uye Davido vari pakati pevanyanzvi vane tarenda muNigeria music industry ine album yake yazvino iri "No Bad Song" yakabudiswa munaNovember 2018. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kizz Daniel Hukama Hupenyu:
Kizz Daniel achiri kuzoroora panguva yekunyora. Isu tinounza chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Kizz Daniel haasati abatanidzwa kune chero mukadzi kubva pakutanga kwebasa rake. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti akachengeta hupenyu hwehukama hwake hwakavanzika chaizvo.
Nekudaro, mushure mekuburitswa kwenziyo yake yakanzi "Mama" (2016), iyo yakagamuchira akawanda makomendi akanaka, Kizz Daniel, achipindura iwo makomendi akataura kuti anga aine wake wekutanga kupenga muindastiri yemimhanzi.
Mushure memibvunzo yakawandisa maererano nemhinduro yake uye nehukama hwake, muimbi weAfropop akavimbisa kuzivisa fan yake chero nguva mumwe munhu paanova musikana wake.
Nezvehukama hwake panguva yekunyora, Kizz Daniel akanzwa runyerekupe rwekuti aibatanidzwa muhukama hwepabonde naChidimma Ekile.
Kunyangwe vaviri vakakurumbira vasina kumbobuda kuzoburitsa pachena kana hukama hwakadai huripo pakati pavo, vateveri vaKizz Daniel vanoramba vaine tarisiro nezve mikana yehukama.
Kizz Daniel Hupenyu Hwemhuri:
Kizz Daniel anobva kumhuri yepakati yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaKizz Daniel:
Mr Kolawole Uthman Anidugbe ndibaba vaKizz Daniel. Aionekwa senge musana wemumhanzi wemwanakomana wake basa. Mr.Kolawole akange aona kuti Kizz Daniel - pazera rake diki - aive nehunyanzvi muunyanzvi hwekunyora nemumhanzi.
Iye, saka, akakurudzira mwanakomana wake kuti arambe achiwedzera hunyanzvi hwake iye achitsvaga kugona muzvidzidzo zvake. Kizz Daniel akarasikirwa nababa vake kumaoko anotonhora erufu pazuva re29th raMay 2015 uye haana kukwanisa kuzviita kumariro ake.
Pasina nguva refu mushure mekuvigwa kwababa vake, Kizz Daniel akakumbira ruregerero nekusavapo apo baba vake vaimuda, achiti aifungidzira kurasikirwa nababa vake netyphoid.
Nezve amai vaKizz Daniel:
Nezve amai vaKizz Daniel, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvake sezvo muimbi achida kuchengetedza hupenyu hwake hwega hwakavanzika. Nekudaro, iye ndiye chete mubereki mupenyu waanaye panguva yekunyora.
Nezve hama dzaKizz Daniel:
Daniel ane vanin'ina vana. Mukoma wake mukuru Toluwalope Sophie Anidugbe mutepfenyuro redhiyo ku cool FM Kano.
Iye anotora-pamwe zvirongwa izvo zvinosanganisira; "Good Morning Nigeria" mukati mevhiki kubva 6:00 am kusvika 10:00 am uye "The Sunday Morning Oasis" kubva 6:00 am kusvika 12 masikati.
Kizz Daniel zvakare ane munin'ina wepedyo mudiki Mofoluwato Uthman Anidugbe uyo waanoda uye akapa Chevrolet Camaro pazuva rake rekuzvarwa.
Kure kure nemhuri yaKizz Daniel yepedyo, zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru nasekuru nasekuru vake.
Saizvozvowo, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaKizz Daniel nasekuru vake pamwe nababamunini vake.
Kizz Daniel Hupenyu hwepamoyo:
Chii chinoita kuti Kizz Daniel afare? Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Kizz Daniel's persona musanganiswa weTaurus zodiac maitiro.
Akangwara, anoda chinzvimbo, akavimbika uye akaviga nezve hupenyu hwake hwepachivande. Asides kubva pakuimba, Kizz Daniel ane shungu yekuseka. Zvimwe zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira; kuridza keyboard uye gitare.
Kizz Daniel Mararamiro:
Kizz Daniel ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora miriyoni imwe panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwemuimbi kunonyanya kubva mukuyedza kwake kwemimhanzi uye kutsigira kunoshanda nemhando dzakadai sa "Hennessy" apo ongororo yemashandisiro ake mari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nezvinhu zvaKizz Daniel, ane dzimba mbiri hombe uye dzinodhura chaizvo. Idzo dzimba dzese dziri muLagos, Nigeria.
Akange achangobva kuwana imba yechipiri mu2018 kunyangwe kukosha kwemari kwechivako chacho kwakasiiwa kusingazivikanwe.
Nyeredzi yeAfropop ine zvakare mota dziri kudhura zvakanyanya. Zvinosanganisira; Mercedes Benz CLO uye Chevrolet. Muimbi anowanzotumira zvimwe zvakatsanangurwa zvinodhura mumidziyo yake ye Instagram.
Kizz Daniel Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Kizz Daniel yehucheche nyaya uye biography pano pane zvimwe zvishoma zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi izvo zvisingawanzo kuverengerwa mune yake bio.
Zita rezita raKizz Daniel rakauya paaive kusekondari. Panguva iyoyo, vanhu vane madhimoni mumatama ese vainzi kutsvoda, asi iye aive nediki padama rimwe chete uye akanzi "kutsvoda". Dhanyeri aive akabatanidzwa ne "Kiss" yekumusiyanisa kubva kune vamwe Daniels kuchikoro.
Kizz Daniel akachinja rake rezita kubva “Tsvoda Dhanieri” to "Kizz Daniel" muna May 2018.
Nezve chitendero chake, Kizz Daniel muKristu uye akarererwa mumusha wechiKristu.
Kizz Daniel naChidimma vakanyora tattoo inoenderana paruoko rwavo. Izvi zvakasimudza kufungidzira kwevafeni nezvehukama hwepamoyo pakati pavo.
Thanks for reading vedu Kizz Daniel's Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!